À Gbanwere Ihe E Dere na Baịbụl ma Ọ Bụ Kpaa Ya Aka?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Armenian (West) Assamese Australian Sign Language Azerbaijani Bashkir Basque Batak (Dairi) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Dangme Danish Dutch Ecuadorian Sign Language Efik Emberá (Catío) Emberá (Chamí) English Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Fon Frafra French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Greek Greenlandic Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Honduras Sign Language Huastec (San Luis Potosi) Hungarian Hunsrik Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Creole Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabardin-Cherkess Kabuverdianu Kachin Kalanga (Botswana) Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khakass Kikamba Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Laotian Lari Latvian Lingala Lithuanian Low German Luganda Luo Luvale Luxembourgish Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mari Mashi Mauritian Creole Maya Mexican Sign Language Mingrelian Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Myanmar Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nicaraguan Sign Language Niuean Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Pidgin (West Africa) Polish Polish Sign Language Pomeranian Portuguese Portuguese (European) Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Romany (Argentina) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Serbia) Romany (Vlax, Russia) Ronga Russian Russian Sign Language Réunion Creole Samoan Sango Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Solomon Islands Pidgin Somali South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Ticuna Tigrinya Tiv Tojolabal Tongan Totonac Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Udmurt Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Mba. E leruola Akwụkwọ Nsọ dị iche iche e ji aka dee n’oge ochie anya ma chọpụta na a gbanweghị ihe ndị bụ́ isi dị na Baịbụl n’agbanyeghị na e ji ihe ndị na-emebi emebi depụtaghachi ya ugboro ugboro ruo ọtụtụ narị afọ.
Ọ̀ pụtara na e nweghị ihe ọ bụla e dehiere n’oge a na-edepụtaghachi ya?
A hụla ọtụtụ narị Akwụkwọ Nsọ ndị e ji aka dee n’oge ochie, ihe e dere ebe ole na ole n’ụfọdụ n’ime ha dịkwa iche n’ihe e dere n’ibe ha. Ihe a gosiri na e dehiere ihe ụfọdụ mgbe a na-edepụtaghachi Baịbụl. Ọtụtụ n’ime ihe ndị ahụ e dehiere bụ ụmụ obere ihe, nke mere na ha emeghị ka isi ihe a na-ekwu gbanwee. Ma, a chọpụtala ebe ole na ole e dehiere ihe ndị gbara ezigbo ọkpụrụkpụ, ọ ga-abụkwa na e nwere ndị ma ụma dehie ụfọdụ n’ime ha ọtụtụ afọ gara aga iji gbanwee ihe Baịbụl na-ekwu. Ka anyị leba anya na abụọ n’ime ihe ndị mere anyị ji kwuo otú ahụ:
Ihe e dere na 1 Jọn 5:7 na Baịbụl ochie ụfọdụ bụ: “e nwere Nna ahụ, Okwu ahụ, na Mmụọ Nsọ n’eluigwe, ha atọ bụkwa otu.” Ma, ihe dị n’Akwụkwọ Nsọ ndị a tụkwasịrị obi gosiri na okwu ndị a adịghị na Baịbụl ndị mbụ dere Baịbụl dere. E denyere ha mgbe ọtụtụ afọ gachara. * N’ihi ya, Baịbụl ndị e leziri anya sụgharịa n’oge a wepụrụ ha.
E dere aha Chineke ọtụtụ puku ugboro n’Akwụkwọ Nsọ ndị e ji aka dee n’oge ochie. Ma, ọtụtụ Baịbụl wepụchara ya, jiri utu aha dị iche iche dochie ya, dị ka “Onyenwe anyị” ma ọ bụ “Chineke.”
Gịnị mere obi ga-eji sie anyị ike na o nweghị ọtụtụ ihe ndị ọzọ e dehiere na Baịbụl?
Ka ọ dị ugbu a, e nweela ọtụtụ Akwụkwọ Nsọ ndị e ji aka dee a hụrụla. N’ihi ya, ịchọpụta ihe e dehiere esighịzi ike otú o siburu. * Mgbe e lebachara akwụkwọ ndị ahụ anya ma jiri ihe e dere na ha tụnyere ibe ha, à chọpụtala na ihe dị na Baịbụl anyị taa bụ ihe dị na Baịbụl mbụ e dere?
Otu ọkachamara aha ya bụ William H. Green kwuru gbasara ihe e dere n’Akwụkwọ Nsọ Hibru (ọtụtụ ndị na-akpọkwa ya “Agba Ochie”), sị: “E nwere ike ikwu na e nweghị akwụkwọ mgbe ochie ọzọ e depụtaghachiri ihe dị na ya nke ọma otú a n’ewepụghị ya ihe ọ bụla.”
E nwere ihe otu ọkachamara n’ihe gbasara Baịbụl dere banyere Akwụkwọ Nsọ Grik nke Ndị Kraịst, ma ọ bụ “Agba Ọhụrụ.” Aha ọkachamara ahụ bụ F. F. Bruce. Ọ sịrị: “Ihe ndị na-egosi na ihe e dere n’Agba Ọhụrụ bụ eziokwu juru eju. Ha karịrị ihe ndị na-egosi na ihe dị n’akwụkwọ ọgụgụ ndị e dere n’oge ochie bụ eziokwu, n’agbanyeghị na e nweghị ndị na-agbagha ihe ndị e dere n’akwụkwọ ọgụgụ ndị ahụ.”
Otu nwoke aha ya bụ Frederic Kenyon, onye ihe gbasara Akwụkwọ Nsọ ndị e ji aka dee n’oge ochie doro anya, kwuru na onye “ji Baịbụl zuru ezu nwere ike ikwu n’atụghị egwu ma ọ bụ n’ezoghị ọnụ na ihe ya ji bụ Okwu Chineke n’eziokwu. Ihe ndị bụ́ isi e dere na ya ka dị otú ha dị ná mmalite n’agbanyeghị na ọtụtụ ọgbọ agaala kemgbe ọtụtụ afọ Chineke nyere anyị ya.”
Olee ihe ndị ọzọ ga-eme ka obi sie anyị ike na ihe dị na Baịbụl ugbu a bụ ihe dị na Baịbụl mbụ e dere?
Ma ndị Juu ma Ndị Kraịst, ndị so depụtaghachi Baịbụl, ahapụghị ide ihe jọrọ ezigbo njọ ndị ohu Chineke mere. * (Ọnụ Ọgụgụ 20:12; 2 Samuel 11:2-4; Ndị Galeshia 2:11-14) Ha dere ihe dị iche iche gosiri na isi ndị Izrel nupụụrụ Chineke adịghị mma, gbaakwa ihe na-abụghị eziokwu ha na-akụzi n’anwụ. (Hosia 4:2; Malakaị 2:8, 9; Matiu 23:8, 9; 1 Jọn 5:21) Otú a ha si depụtaghachi ihe niile nke ọma gosiri na ha bụ ndị a ga-atụkwasịli obi nakwa na ha ji Okwu Chineke dị nsọ kpọrọ ezigbo ihe.
Ebe ọ bụ Chineke nyere ndị dere Baịbụl ike mmụọ nsọ ha ji dee ya, ọ̀ bụ na ọ gaghị ejide n’aka na ọkọ agaghị akọ ihe e dere na ya? * (Aịzaya 40:8; 1 Pita 1:24, 25) A sị kwuwe, ọ chọrọ ka ọ baara ma ndị oge ochie ma ndị oge a uru. (1 Ndị Kọrịnt 10:11) N’eziokwu, “e dere ihe niile e dere n’oge gara aga ka e jiri ha kụziere anyị ihe, ka obi anyị na-atachi na nkasi obi anyị na-enweta n’Akwụkwọ Nsọ wee mee ka anyị nwee olileanya.”—Ndị Rom 15:4.
Ọ na-abụ Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya kwuwe okwu mgbe ụfọdụ, ha ekwuo ihe e dere n’Akwụkwọ Nsọ Hibru. O meghị ha obi abụọ ma à gbanweela ihe Chineke chọrọ ka e dee na ya.—Luk 4:16-21; Ọrụ Ndịozi 17:1-3.
^ par. 3 Okwu ndị ahụ adịghị n’akwụkwọ Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus, Akwụkwọ Mpịakọta Vatican nke 1209, Vulgate Latịn nke mbụ, Philoxenian-Harclean Syriac Version, ma ọ bụ Peshitta nke Siriak.
^ par. 5 Dị ka ihe atụ, a hụla Akwụkwọ Nsọ Grik nke Ndị Kraịst (ọtụtụ ndị na-akpọ ya Agba Ọhụrụ) e ji aka dee karịrị puku ise (5,000).
^ par. 9 E nweghị ihe Baịbụl kwuru nke gosiri na ndị mmadụ, ndị na-anọchite anya Chineke anaghị emehie ihe. Kama, o kwuru ihe bụ́ eziokwu gbasara mmadụ ọ bụla. Ọ sịrị: “Ọ dịghị mmadụ ọ bụla na-anaghị eme mmehie.”—1 Ndị Eze 8:46.
^ par. 10 Ọ bụ eziokwu na ihe Baịbụl kwuru gosiri na Chineke agwaghị ndị dere Baịbụl okwu niile ha ga-ede, ha ana-ede, ma o duziri ha, ha edee uche ya.—2 Timoti 3:16, 17; 2 Pita 1:21.
Baịbụl Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara Akụkọ Banyere Baịbụl Akụkọ Mere Eme na Baịbụl
Chọpụta n’onwe gị ma ihe ndị ha kweere ọ̀ bụkwa eziokwu.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ À Gbanwere Ihe E Dere na Baịbụl ma Ọ Bụ Kpaa Ya Aka?
ijwbq isiokwu 129
Ha Ji Baịbụl Kpọrọ Ihe—Nkebi Ya (William Tyndale)